အမျိုးသားစိတ်ဝမ်းကွဲမှုနှင့် လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ရှောင်ရှားပါ | ဧရာဝတီ
အမျိုးသားစိတ်ဝမ်းကွဲမှုနှင့် လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှု ရှောင်ရှားပါ
ဧရာဝတီ| January 22, 2013 | Hits:3,551
6 | | နေပြည်တော်နှင့် ရန်ကုန်တွင် ၂ ရက်ဆက်တိုက် ပြောကြားသွားသော သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ မိန့်ခွန်းများမှာ မြန်မာပြည်၏ အနာဂတ်စီးပွားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတို့ အတွက် စိတ်အားတက်ကြွဖွယ် ကောင်းလှသော်လည်း ယင်း လုပ်ငန်းစဉ်ကို အကောင်အထည်ဖော်မည့် အစိုးရ ဗျူရိုကရေစီ ယန္တရား၏ စွမ်းဆောင်နိုင်ရည်ကိုမူ သံသယရှိသည်။
ဇန်နဝါရီ ၁၉ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ဖိုရမ်၌ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က မြန်မာပြည်၏ လူမှု စီးပွားရေးဘဝ တိုးတက်ရေးအတွက် အစိုးရအနေဖြင့် ကောင်းမွန်သည့် အုပ်ချုပ်မှု စနစ်နှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရ ဖြစ်ပေါ်စေရေးကို ကြိုးပမ်းနေကြောင်း၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် စီမံခန့်ခွဲရေး စနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ ကိုလည်း ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်း၌ အခြေခံ လူမှု စီးပွားရေးဘဝ တိုးတက်ရေးအတွက် လယ်ယာကုန်ထုတ်လုပ်မှု ကဏ္ဍတိုးမြှင့်ရေး၊ ကျေးလက်ဒေသ ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းနှင့် အိမ်တွင်း စက်မှု လက်မှုလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ အသေးစား ပုဂ္ဂလိက ငွေစုငွေချေးကိစ္စ၊ ကျေးလက်လူမှုဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအပြင် ပြည်သူလူထု၏ ဝင်ငွေ တိုးတက်ရေးတို့ အတွက် အလေးထား ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းပြောသည်မှာ အားတက်ဖွယ်ဖြစ်သည်။ ဇန်နဝါရီ ၂၀ ရက်နေ့က ရန်ကုန်တွင်ကျင်းပသည့် အရပ်ဘက်လူမှုအဖွဲ့အစည်းများနှင့် ပထမဆုံး အကြိမ် တွေ့ဆုံ ရာတွင်လည်း သမ္မတက အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၏ လိုအပ်ချက်၊ တင်ပြချက်များကို အလေးထား ဆောင်ရွက်မည် ဖြစ်ကြောင်းပြောခဲ့သေးသည်။
စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကောင်းဆုံးမှာ တိုင်းရင်းသား လက်နက်ကိုင် အဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့နှင့် အပစ်ရပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအရ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး အဖြေရှာသည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ဖြစ်ထွန်းနေပြီ ဆိုသောကြောင့် တိုင်းရင်းသားဒေသများ၏ ဖွံ့ဖြိုးရေး၊ လူနေမှုဘဝများ တိုးတက်မြင့်မားရေး အပါအဝင်၊ ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး ကိစ္စရပ်များကို အနာဂတ်တွင် ပိုမိုတိုးတက်လာရန် လုပ်ဆောင်နိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ရပါသည်။
သို့ရာတွင် ခိုင်မာသည့် နိုင်ငံရေး သဘောတူညီချက်များ မရသရွေ့ ထာဝရ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ဒေသအသီးသီး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆောင်ရွက်ချက်များမှာ သဲထဲ ရေသွန်သကဲ့သို့ ဖြစ်မည်။
သမ္မတက ဇန်နဝါရီ ၁၉၊ ၂၀ နှစ်ရက်လုံး ကေအိုင်အေ နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးရန် ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီး KIA ၏ လိုင်ဇာဌာနချုပ်ကို အပြီးသတ် တိုက်ခိုက် သိမ်းယူမှု မပြု၊ တပ်မတော်အနေဖြင့် ငြိမ်းချမ်းရေးလိုလားသည်မှာ သံသယ ဖြစ်ဖွယ်မရှိဟုပင် ပြောဆိုခဲ့သော်လည်း တပ်မတော်၏ “မိမိ ကိုယ်ကိုယ် ခုခံကာကွယ်ရုံသာ” ဆိုသည့်အချက်ကို ဘဝင်မကျပေ။ လေကြောင်းပစ်ကူနှင့် အမြှောက်ကြီးများဖြင့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုသည် ခုခံစစ်ဖြစ်ကြောင်း ယုံကြည်ရန် ခက်ပေသည်။
တချိန်တည်းတွင် ကေအိုင်အေကလည်း အရပ်သားများကို မတိုက်ခိုက်ခြင်း၊ အရပ်သားများနှင့် နီးရာတွင် စစ်စခန်း မချခြင်းဖြင့် စစ်ပွဲကြောင့် အပစ်မဲ့ပြည်သူများ မထိခိုက်စေရေး အာမခံရမည်။ အရေးအကြီးဆုံးမှာ တိုက်ပွဲများ ပိုမို အရှိန်မြင့်လာသောကြောင့် ဒေသခံပြည်သူ တသိန်းခန့် တို့မှာ စစ်ပြေးဒုက္ခသည်များအဖြစ် အခက်အခဲနှင့် ရင်ဆိုင်နေကြရခြင်းပင်။
စစ်ဆိုသည်မှာ မည်သည့် တစုံတယောက်အတွက်မျှ အကျိုးမရှိသည့်အပြင် တိုက်ပွဲတွင် ပါဝင်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဘက် သေကြေပျက်စီးကြရ ရုံမျှမက မြေဇာပင်အဖြစ် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုပါ ဒုက္ခနှင့် ရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ထို့အပြင် စစ်အသုံးစရိတ် ဖြည့်တင်း ကြရသောကြောင့် ပညာရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ လူမှုဖူလုံရေး စသည့် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ကဏ္ဍများတွင် သုံးရမည့် ငွေများ လျော့ပါးကာ နောက်ဆုံး အချိန်ကုန်လူပမ်းရုံမက နိုင်ငံသားတို့၏ အသက်၊ သွေး၊ ချွေး တို့ ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးကြရသည်။
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အစိုးရ ရည်မှန်း ထားသကဲ့သို့ ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် မြန်မာပြည်အား ဂုဏ်သိက္ခာရှိစွာ ခေါင်းမော့ စေချင်သည်ဆိုလျှင် ပြည်တွင်းစစ်ကို ချက်ချင်း ရပ်စဲရမည်။အပစ်အခတ် ရပ်စဲပြီးလျှင် နိုင်ငံရေးနည်းအရ အဖြေရှာရန်အတွက် နှစ်ဦးနှစ်ဘက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်ရမည်။ အာဃာတများ ခဝါချကာ နှစ်ဘက်စလုံးက လက်ခံနိုင်မည့် အခြေခံကောင်းများ အုတ်မြစ်ချနိုင်ရေးအတွက် နည်းလမ်း ကောင်းများကို ရှာဖွေရ ပေလိမ့်မည်။
သို့ရာတွင် အပစ်မရပ်နိုင်ဘဲ ဆက်လက်တိုက်ခိုက်နေခြင်းသည် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်၏ အမိန့်ကို တပ်မတော်က မနာခံခြင်းလား၊ တပ်မတော်က သမ္မတကို အားပျော့သူအဖြစ် ပုံဖော်နေခြင်းလား သို့မဟုတ် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်ကိုယ်တိုင် တပ်မတော် အရာရှိဘဝမှ လာသူ ဖြစ်သောကြောင့် ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း စစ်တပ်က ထိုးစစ်ဆင်နေခြင်းအပေါ် အစိုးရနှင့် တပ် သဘောထား တသားတည်းလား ဆိုသည့် မေးခွန်းများကလည်း မေးချင်စရာ ဖြစ်နေသည်။
တဖက်တွင်လည်း တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တိုင်းလိုလိုက အပစ်ရပ်ပြီး နိုင်ငံရေးအဖြေရှာမှု ဆက်လက် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန် သဘောထားနိုင်နေချိန် တွင် ကေအိုင်အေ တဖွဲ့တည်း ကသာ အပစ်မရပ်ဘဲ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမည်ဆိုသည်မှာ များစွာ သဘာဝ မကျလှပေ။
ကချင်စစ်ပွဲအား မရပ်စဲနိုင်ပါက နိုင်ငံသားတို့၏ အသက်၊ သွေးများ ထပ်မံ ပျက်ဆီးကြရမည်ဖြစ်ပြီး အမျိုးသား စိတ်ဝမ်းကွဲမှု၊ လူမျိုးရေး မုန်းတီးမှုတို့ကသာ ပိုမိုဆိုးရွားလာ မည်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော်သစ်ထူထောင်ရေး နှောင့်နှေးမည်ကို နှစ်ဘက်လက်နက်ကိုင်ခေါင်းဆောင်များ သတိတရား ရှေ့ထားပြီး သဘောပေါက် လက်ခံကြစေရန် တိုက်တွန်းရေးသား အပ်ပေသည်။
ခိုင်မာသော ယုံကြည်မှု မတည်ဆောက်နိုင်လျှင် တည်တံ့သော ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်
10 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website လူလေး January 22, 2013 - 9:37 pm	ဟုတ်ပါဗျာ
ဗျူရိုကရက်ရော အားကို မရဘူး
အတိုက်တွေလဲ အတူတူပဲ အစိုးရကို ဝေဖန်တာပဲ တတ်တယ် သူတို့ ကိုယ်တိုင်လဲ ဘာပေါ်လစီမှ သေချာမရှိသေးဘူး
သတင်းလွတ်လပ်မှု ရတာ အမြတ်ဗျ
နောက်မဟုတ်ရင် ကျုပ်တို့ ဘာမှာ သေချာသိမှာ မဟုတ်ဘူး
ခုဆို သတင်းလွတ်လပ်မှု တရုတ်ထက်သာတယ်
အရည်ချင်းရှိတဲ့သူတွေ ဗျူရိုကရက် တွေ နေရာ ရောက်ရင် အားလုံးအိုခေ လာမှာပါ
Reply	Mr Kian January 23, 2013 - 12:00 pm	KIO/KIA are defenders of Kachin Peoples and Kachin Land from Intruders and KIO/KIA also fight for Democracy , Rights of Ethnics/Citizens , then to gain PEACEFULLY Country, United States of Burma Federation.
Reply	swe htwe January 22, 2013 - 11:50 pm	It isagood message.
Reply	Linyone January 23, 2013 - 2:08 am	The problem is the the lack of authority. President is losing trust from the citizens. His words are empty words. Army does not care what he says. Army does not obey his words. If he were command in chief asapresident, it would beadifferent story. Now, Thein Sein is just an idiot president who has no authority to run the nation. He isalaughing matter to the world.
Reply	ကိုရဲ January 23, 2013 - 9:57 am	အယ်ဒီတာ၏ရေးသားချက်များသဘာဝကျပါသည်။စာဖတ်သူ၏အမြင်ကိုလည်းတင်ပြချင်ပါ သည်။အဓိကပြောလိုသည်မှာKIA အကြောင်းဖြစ်ပါသည်။KIAသည်နောင်နှစ်ပေါင်း၁၀၀ ကြာသည့်တိုင်ငြိမ်းချမ်းရေးယူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။မဖြစ်နိုင်သောအကြောင်းများကိုပြနေပါလိမ့် မည်။KIA ဟုဆိုလိုက်သည်နှင့်ကချင်ပြည်နယ်ကြီးကိုကိုယ်စားပြုနေသည်မြင်နေလျှင်မှားပါ လိမ့်မည်။ဦးဇခုန်တိန့်ယိန်းတို့ဦးလဂျွန်ငန်ဆိုင်းတို့လဲ ကချင်တွေဖြစ်ပါသည်။ ကချင်အားလုံးက အစိုးရကိုဆန့်ကျင်နေသည်မဟုတ်ပါ။ သည်အချက်ကို ကွဲကွဲပြားပြားသိကြစေချင်ပါသည်။ ကချင်ပြည်နယ်မှာကချင်လူမျိုးတစ်မျိုးထဲနေသည် မဟုတ်ပါ။ဗမာအပါအ၀င်တိုင်းရင်းသားစုံ နေထိုင်ကြပါသည်။KIA ဘာကြောင့်ငြိမ်း ချမ်း ရေးယူမည်မဟုတ်ဟုပြောရခြင်းမှာ လူတော်တော်များများသိထားကြသည်မှာ စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ အရမ်းချမ်းသာသည်ဟူ၍ဖြစ်ပါသည်။ သူတို့ထက်အဆပေါင်း များစွာ ချမ်းသာနေသူများမှာKIA ခေါင်းဆောင်များဖြစ်သည်။ အရှေ့တောင်အာရှတွင် အချမ်းသာအဖွဲ့အစည်းသည်KIA ဖြစ်ပါသည်။ စစ်အစိုးရမတိုင်ခင်နှင့်စစ်အစိုးရခေတ် တစ် လျှောက်လုံး စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်စုဆောင်းလာပြီး အင်အားကြီးမားသောလက်နက်ကိုင် တပ်များတည်ထောင်ထားနိုင်ခဲ့ပါသည်။ ထို့ကြောင့်ယနေ့ခေတ်တွင် လက်မထောင်နေခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ ရိုးရိုးသားသားမြင်နေကြသောမြန်မာပြည်သားတို့အမြင် တွင် အစိုးရကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်ကိုလည်းကောင်းအပြစ်မြင်နေပါလိမ့်မည်။ တဖက် သတ်တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့သဘောမျိုးပြောကြပါလိမ့်မယ်။ ဤအမြင်များလုံးဝမှားနေပါသည်။ မြေပြင်မှာတကယ်ဖြစ်ပျက်နေသောအခြေအနေမှန်ကို တိတိကျကျသိအောင်လေ့လာမည်ဆိုလျှင် KIA တို့၏ဆိုးရွားလွန်းသောလုပ်ရပ်များကို သည်ထက်မက ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်သိလာပါလိမ့်မည်။ ကချင်ပြည်နယ်အကျိုးနဲ့သန်း၆၀ ကျော်တဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးကိုထောက်ရှုမယ်ဆိုရင် KiA သည် KNU ကဲ့သို့ပွင့်လင်းစွာ ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ KIA လူတစ်စု၏အတ္တ ကြီးမားလွန်းသည့်အတွက် ယခုကဲ့သို့ စိတ်မချမ်းမြေ့စရာကိစ္စများ ဖြစ်နေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ရှင်းလင်းမြင်သာသောအချက်ကို ပြောပြရပါလျှင် လူတိုင်းသည်ဘ၀တစ်ခုကို စိတ်တိုင်းကျဖြတ်သန်းနိုင်သည်မဟုတ်ပါ။မကျေနပ်ချက် ရှိတိုင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲဝင်နေရမယ်ဆိုရင် ရခိုင်ပြည်မှာ ရခိုင်တွေ၊မြေပြန့်အနှံ့အပြားမှာ ဗမာတွေ၊မြိတ်ကော့သောင်းဘက်မှာထားဝယ်တွေအားလုံး အားလုံး လက်နက်ကိုင်ဖြေရှင်းနေကြမယ်ဆိုရင် မပြီးဆုံးနိုင်သောစစ်ပွဲတွေစဉ်ဆက်မပြတ် ဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါသည်။ငြိမ်းချမ်းရေးကြိုးပမ်းသူ အားလုံးကို ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ သို့သော်KIA သည် နောင်နှစ်ပေါင်းတစ်ရာကျော်သည့်တိုင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင်သမ္မတ ဖြစ်သည့်တိုင် ငြိမ်းချမ်းရေးယူမည်မဟုတ်ကြောင်း တင်ပြလိုပါသည်။
Reply	redjack January 23, 2013 - 1:51 pm	the whole burma also not only burmese . Remember ! you know what i mean Right! you are looking at your side only
why all the burmese want to control the whole country . you know what i mean Right! you ain”t that stupid right!
but your comment look you so stupid ! SORRY DUDE
Reply	မြန်မာပြည်သား January 27, 2013 - 5:51 pm	ကိုရဲ ခင်ဗျား မှန်သည် ထင်လျှင် ပင်လုံ စာချုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ ဦးအောင်ဆန်းကို ပါ ရဲရဲကြီးဆဲလိုက်ပါလားဗျာ။
Reply	kumudra January 23, 2013 - 4:52 pm	How many percentage of Kachin people want KIA as their government?
How many percentage of Kachin people are with KIA, holding guns to fight government army for Kachin Country?
Were those people who protesting/blaming government and it’s army, also writng comment here, supporting KIA/KIO side are currently with KIA/KIO and fighting bravely for the Kachin State?
Are they staying overseas or somewhere convenient life ( as refugee or whatever status) but only creating problems and dividing among people in our country?
People in our country are wise enough.
War can not be started and stopped by one side.
Reply	chilay January 24, 2013 - 8:06 am	100% support editor’s wise article.
Reply	minko January 27, 2013 - 6:51 pm	ကေအိုင်အေ က စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေထက် ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ ဘာကိုထောက်ဆပြီးပြောတာလဲ-စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေ -သူတို့ သားသမီးတွေ ချမ်းသာကြွယ်ဝမှူက ဘယ်လောက်ရှိသလဲ-
-ကေအိုင်အေ ခေါင်းဆောင်တွေ ချမ်းသာတယ်ဘဲ ထားဦး-
သူတို့ က ကျောက်စိမ်းကြောင့်ချမ်းသာတာ-ပြည်သူလူထု မျက်ရည်ပေါက်ကြီးငယ်ကျပြီးမှ ချမ်းတာမဟုတ်ဘူး။ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေချမ်းသာတာက- မရှိဆင်းရဲသား တောင်သူယ်သမားတွေပိုင် လယ်မြေတွေ အတင်းဓမ္မသိမ်းပြီး -လက်ဝေခံ ခေတ်ပျက်သူဌေး ကို ရောင်းစားလို့ ချမ်းသာတာ- အခုထိ တောင်သူတွေ လုပ်စားစရာ လယ်မြေ မရှိလို့မျက်ရည်တွေကျနေတုန်းဘဲရှိသေးတယ်- ဘယ်မြို့ ရွာကြည့်ကြည့် -ကြည့်တတ်ရင်မြင်ပါတယ်- ကေ အိုင် အေ ချမ်းသာတယ်ဆိုတာ- အလကားပါ- ဒီလိုရေးလို့ကချင်လို့ မထင်လိုက်နဲ့ -လယ်မြေ အသိမ်းခံထားရတဲ့ ဗမာခင်ဗျ-ဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ပါ။